Fanadiovana fomba fisaina sy fiaina… | NewsMada
Fanadiovana fomba fisaina sy fiaina…
Arahaba soa, arahaba tsara. Efa mandeha ny vava asa fandaminana sy fanadiovana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, raha tsy hilaza afa-tsy izay aloha. Renivohitr’i Madagasikara: fitaratra, fantatra sy hitan’ny vahiny voalohany. Mby aiza? Efa hita soritra ny fiovana. Eo, ohatra, ny fifamoivoizana, ny tsena, ny fandraofana fako… Ho avy, ohatra, ny fanadiovan-tatatra amin’ny alalan’ny tana-maro.
Antananarivo tsy vita indray andro, ny taotrano tsy efan’irery. Ny amin’izay indrindra, ho very maina ihany ny ezaka na toy inona, raha tsy misy faharesen-dahatra sy fahavononana ary finiavana handray ny fandaminana sy fanadiovana: fiarovana ny asa vita, fikojakojana, fanaraha-maso… Ho tsentsina ihany ny tatatra ary haloto ihany eny rehetra eny, ohatra, raha tsy miezaka manaja fahadiovana ny tsirairay.
Firy tao-maty, ohatra, no nanadiovana ny tatatra sy lakan-drano izay? Misy hatrany ny minia manary fako eny rehetra eny. Nefa efa naman’ny manadio izay tsy mandoto, naman’ny mikojakoja sy mitandrina izay tsy manimba… Ny fomba fisaina sy fomba fiaina no mila fandaminana sy fanadiovana voalohany sy mitohy ary maharitra , raha tiana ny handroso: tanàna madio, mponina salama sy finaritra…
Tsy misy nahay tany an-kibon-dreniny, fa ny mitan-tsotro aza nianarana? Amin’izao, ampianarina sy zarina handeha amin’ny sisin-dalana, ohatra, ny mpandeha an-tongotra; ny mpivarotra hamelatra ny entany any anaty tsena; ny mpamily fiara sy mitatitra hanaja ny lalàna amam-pitsipika… Inona na ahoana koa? Sasatry ny miarina izay ela izay, ka izao vao manao ainga vaovao amin’ny fandaminana.
Mila fanadiovana sy fandaminana koa ny fomba fisaina sy fiaina. Sanatria, ho tonga amin’ny fampianarana sy fanazarana, raha misy ny tsy mety na tsy te hivoatra? Eny, mety hidona amin’ny fanerena sy fanasaziana amin’izany aza. Difotry ny fiainana andavanandro sy ny fitadiavana? Nefa tsy hatao ho amin’ny fivoarana ny maha olona ve izay atao isan’andro… mila fandaminana sy fanadiovana amin’izay koa.